कोरोना महामारी : स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरे घाटा कसलाई - हामी जनतालाई ! | GNN Nepal GNN Nepal कोरोना महामारी : स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरे घाटा कसलाई - हामी जनतालाई ! | GNN Nepal
सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड बनाइदियो, त्यसलाई पालना गर्ने पालो जनताको
वैशाख ६ गते, २०७८ १९:३४ मा प्रकाशित
एकै छिन सोच्नुस् त ! नेपालमा पनि लाखौँको सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमित हुँदै गए भनेहाम्रो देशको हालत के होला ? हाम्रो देशका अस्पतालहरुमा अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आइसियूको कमी भए के होला ? अस्पतालका डाक्टरहरु आफैं सङ्क्रमित भए अन्य बिरामी कस्ले जाँच गर्ला ? के नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले संक्रमितको भार थेग्न सक्ला ? अझ त्यसमाथि पनि कोरोनाको नयाँ भेरियन्टले बालबालीकालाई च्याप्दा उनिहरुको हालत के होला ? पक्कै पनि यो कुरा सोच्दै कहाली लागेर आउँछ ।
र अब यो पनि सोच्नुस् कि, के आफूले कोरोनालाई फैलन नदिन सानो केहि कदम भएपनि चाल्नु भएको छ । तपाई शिक्षक, विद्यार्थी, व्यापारी, गृहिणी, व्यवसायी जो जे हुनुहुन्छ, के तपाईँले सवारीसाधनमा वा भिड हुने ठाउँमा सामाजिक दुरीलाई ख्याल राख्नु भएको छ ? सरकारले बनाइदिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नु भएको छ ? सायद कसैले होला, कसैले नहोला । अपवादलाई कोरोनाबाट बच्न तरिकाहरू थाहा पनि नहोला । अक्सर हामीहरू आफूलाई थाहा भएको कुराहरू अरूलाई बताउछौं र सचेत गराउँछौं । तर के तपाई आफैँ ती कुराहरूमा सचेत हुनुहुन्छ । प्रश्न तपाईँलाई ।
कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट नेपाल आइसक्यो
यो थियो केवल तपाईँले केहिबेर सोच्नुपर्ने कुराहरू । किनकि सरुवा रोग विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ डाक्टर शेर बहादुर पुनका अनुसार नेपालमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट भित्रिसकेको छ । उनले विशेष गरी यो भाइरसबाट साना बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई जोगाउन भनेका छन् । हाम्रा घरमा भएका साना बालबालिका साह्रै चञ्चल हुन्छन्, डा. पुन भन्छन्, “त्यसैले उनीहरूलाई स्वास्थ्यका मापदण्ड सिकाउने, कोरोना भाइरसको बारेमा चेतना दिने हामी ठुला व्यक्तिको जिम्मेवार हो ।”
सरकारले पनि सोमबारबाट कोरोनालाई लिएर थप कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । वैशाखको मसान्तसम्म विद्यालयदेखि बढी भिड हुने क्षेत्रहरू बन्द गर्ने निर्देशन दिएको छ । सरकारले यो निर्णय गरेसंगै तपाई हामी दिउँसो काम गरेर राती खानुपर्ने मानिसलाई तनाव हुन सक्ला वा भैसकेको छ । तर सरकारले गरेका यी निर्णयलाई आत्मसात् गर्दै स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाउने हो भने हामी लकडाउनको बन्धनबाट चाँडै मुक्त हुने छौँ । स्वास्थ्यविद् हरुले पनि कोरोनाको नयाँ भेरियन्टको खतरालाई पराजित गर्नका निम्ति सरकारले बनाइदिएको नियम जनताले सुझबुझका साथ मान्नुपर्ने हुन्छ नभए हामी झन् ब्राजिल, इटाली, भारतका नागरिककै हालतमा पुग्छौं भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
अब कुरा गरौँ – भारतसंग खुला सिमाना भएको देश नेपालको । भलै नेपालमा भारतको जस्तो लाखौँमा सङ्क्रमित थपिएका छैनन् । तर तुफानअघिको शान्ति भनेजस्तै हालत भने नेपालको पक्कै छ । कोरोनाको परिवर्तित रूपहरू बढ्दो र खतरनाक हुने भएकाले पनि नेपाल सतर्कता हुन जरुरी छ । भारतीय विज्ञहरूले पनि केहि महिना अघि नै देशमा नयाँ भेरियन्टले तहल्काले पिट्ने चेतावनी सरकारलाई दिइसकेका थिए । तर भारत सरकार अटेर भयो । त्यहाँका जनताहरू खुलेआम हिँडे स्वास्थ्य मापदण्ड त परै जाओस् लाखौँको सङ्ख्यामा प्रदर्शन र जुलुस भए । जसलाई सरकारले रोक्न जरुरी ठानेन । जसको फलस्वरूप आज भारतमा दैनिक तीन लाख हाराहारीमा सङ्क्रमित थपिदैं गएका छन् । अस्पतालमा अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आइसियु जस्ता कुराहरूको कमी हुँदै गएको छ ।
हो ! यस्तै हालत नेपालको पनि छिट्टै नहोला भन्न सकिन्न । किनकि भारत कोभिड-१९ को भ्याक्सिन उत्पादन गरेर विश्वभर बाँड्ने देश हो, तर पनि त्यहाँ लाखौँ मानिस सङ्क्रमित हुँदै गए । नेपालले त त्यहि भ्याक्सिन पनि उत्पादन गर्दैन, त्यसैले कोरोनालाई बेवास्ता गरे झन् यहाँको हालत के होला ? यसैलाई पुष्टि गर्दै स्वास्थ्यविद् डा. रवीन्द्र पाण्डे भन्छन्, नेपालको हालत भारतकै जस्तो हुनबाट रोक्न प्रत्येक नागरिक सुरक्षित हुन जरुरी छ ।
एकै छिन अब नेपाल छोडेर भारतलाई नियालौँ
भारतमा कोरोनाले पुरै हाहाकार मच्चाइ दिएको छ । हरेक दिन कोरोना सङ्क्रमित हुने सङ्ख्या तीन लाख पार गर्दै गएको छ । भने कोरोनाकै कारण अहिले सम्ममा डेढ लाख भन्दा बढी मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन्। अहिले भारतभर १९ लाख भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् ।
सोही कारण भारतले कोरोनाको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै प्राय सबै प्रदेशहरूमा कडा लकडाउन लगाइएको छ । मानिसहरूलाई घरमै बस्न कडा सल्लाह दिइएको छ।
भारतमा नयाँ कोभिड तरंग बढी सङ्क्रामक
भारतमा कोरोनाभाइरस महामारीको दोस्रो तरंग सेप्टेम्बर २०२० को पहिलो लहरभन्दा फरक छ, किनकि नयाँ केसहरूको दर बढेको छ। भारतमा प्रति दिन १० हजारदेखि ८० हजारसम्मका नयाँ सङ्क्रमितहरूको वृद्धि ४० दिन भन्दा कम दिनमा भएको छ । पछिल्लो सेप्टेम्बरमा ८३ दिनमा यत्तिका केसहरू देखा पर्ने गरेका थिए ।
यसरी दिनप्रतिदिन देशमा कोरोनाको दोस्रो लहरले असर गर्दै गएपछि भारतले विभिन्न क्षेत्रहरू बन्द गर्न थालेको छ । भारतको राजधानी दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले त्यहाँ कोरोनाको चौथो लहर आएको हुँदा सोमबार आज रातदेखि अप्रिल २६ सम्म नाइट कर्फ्यू लगाइने आधिकारिक घोषणा गरेका छन् । भने देशका अस्पतालमा संक्रमितको सङ्ख्यामा वृद्धि भएसंगै भारतको स्वास्थ्य प्रणाली तनावमा आएको पुष्टि गरेका छन् ।
समग्रमा भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्टले तरङ्ग मच्चाउँदा लकडाउन बढाउने, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू रोक्ने, शिक्षण संस्थाहरू बन्द गर्ने जस्ता निर्णयहरू गर्दै आएको छ ।
नेपालले भारतबाट सिक्नुपर्ने पाठ
नेपालमा भारतमा जस्तो जनघनत्व छैन । तर पनि सङ्क्रमित हुने मानिसहरू भने अवश्य छन् । भारतले अहिले धमाधम लकडाउन, अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द, वर्क फ्रम होम लागु गरिरहेको छ । नेपालमा त्यस्तो भयावह स्थिति नभए पनि भारतबाट हामीलाई बेलैमा सचेत हुनुपर्ने सिक मिलेको छ । स्वास्थ्यविद् पुन पनि भारतले सुरुका चरणमा हेलचेक्र्याइँ गरेकाले अहिले त्यहाँ डरलाग्दो परिस्थिति सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै बताउँछन्, ‘नेपालमा पनि भाइरसको परिवर्तित नयाँ रूपहरू विकसित हुँदै गएकोले बेलैमा बच्न जरुरी छ ।’
नेपालमा पहिलैदेखि भएका भाइरसमाथि नयाँ भेरियन्ट पनि थपिएका छन्, डा. पुन भन्छन्, तर नयाँ भेरियन्टका विषयमा अनुसन्धान नभएकाले कति वटा भाइरसका परिवर्तित स्वरूप छन् भन्ने यकिन छैन ।
भारत लगायत बेलायतमा पनि भाइरसको नयाँ स्वरूपले बालबालिकालाई बढ्ता हानी गरिरहेको छ । नेपालमा पनि त्यसको इन्ट्रि फेजका रूपमा बाल अस्पतालहरूमा बालबालिकाको चाप बढ्दो छ । झाडा, पखाला, ज्वरोका कारण बाल अस्पतालहरू भरिदैं गएका छन् । यस्तो परिस्थितिको पहिचान गरी बेलैमा सतर्कता नभए बालबालिकालाई उपचार गर्ने चिकित्सकको समेत कमी हुने डा. पुनले चेतावनी दिएका छन् ।
पहिलेको वर्ष भन्दा यो वर्ष खतरनाक हुन्छ ।
विज्ञहरूले चाहे त्यो कोरोनालाई लिएर होस् या जलवायु परिवर्तन २०२१ अघिल्लो वर्ष (२०२०) भन्दा बढी खतरनाक हुने सङ्केत दिएका छन् । यसैलाई वर्णन गर्दै स्वास्थ्यविद् पुनले विश्वमा कोरोना सङ्क्रमित हुनेको जुन रेस छ त्यसलाई आधार मान्ने हो भने विश्वका लागी २०२१ घातक वर्ष हुने जनाएका छन् । यसकै परिणामका रूपमा नेपाल, भारत लगायतका एसियाली देशहरूमा पहिलेको वर्षको तुलनामा यो वर्ष ह्वात्तै कोरोना सङ्क्रमित बढेका छन् ।
उदाहरणका लागी – २०२० मा ठिक यही समय नेपालमा जम्मा १० देखी १५ जनालाई मात्रै कोरोनाको सङ्क्रमण हुने गर्दथ्यो तर अहिले बढेर दैनिक १२ सय भन्दा बढीमा सङ्क्रमण हुने गरेको छ । अझै नेपालमा पिसिआर टेस्ट कम हुने भएका कारण सङ्क्रमित सङ्ख्यामा पनि कम्ती आएको हो । त्यसमाथि बालबालिका तथा ठुलै व्यक्ति पनि बाहिर डुलेर आएपछि आफन्तसंग टाँसिने, हातमुख र कपडा परिवर्तन नगरी घरभित्र छिर्नाले पनि संक्रमणदरलाई बढ्न सहयोग मिलिरहेको छ । त्यसैले स्वास्थ्यविद्हरुले समयमै चेतावनी दिई स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।
यसरी सर्सर्ती हेर्दा कोरोना महामारीबाट हामी जनता चौतर्फी चपेटामा परेका छौँ । स्वास्थ्यको मापदण्ड सरकारले बनाइदिएको नियम पालना नगरे घाटा व्यहोर्ने पनि हामी जनता नै हुने छौँ । हामीले कोरोनाबाट जोगिन कदम चालेनौँ भने हाम्रै प्रियजनहरूलाई सङ्क्रमित पार्ने सक्छौँ । त्यसमा सरकारलाई दोष दिएर पनि फाइदा हुने छैन । सोही कारण कोरोना महामारीलाई गम्भीर रूपमा लिन डा.रवीन्द्र पाण्डेको आग्रह छ ।
सामाजिक सञ्जा‍‍लमा आज : गुपचुप शैलीबाट भेटेको त्यो भेटले प्रधानमन्त्रीमाथि उठिरहेको राष्ट्रवादको प्रश्न
प्रधानमन्त्रीसहित अन्य ६ जनाको कोरोना रिर्पोट सार्वजनिक